Amabali EBhayibhile: UYona Nentlanzi Enkulu - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
KHANGELA laa ndoda isemanzini. Isengxakini, akunjalo? Iza kuginywa yilaa ntlanzi! Ngaba uyazi ukuba ngubani le ndoda? Igama layo nguYona. Masibone ukuba ingene njani na kule ngxaki.
UYona ngumprofeti kaYehova. Kungekudala emva kokuba umprofeti uElisha eﬁle, uYehova uthi kuYona: ‘Yiya kwisixeko esikhulu saseNineve. Apho ububi babantu bukhulu gqitha yaye ndifuna ubaxelele ngobo bubi.’
Kodwa uYona akafuni ukuya. Ngoko ukhwela enqanaweni eya kwelinye icala elikude neNineve. UYehova akayithandi le nto yokubaleka kukaYona. Ngoko ubangela ukuba kubekho isaqhwithi esikhulu. Sikhulu kangangokuba inqanawa isengozini yokuzika. Oomatiloshe boyika kunene yaye bayakhala becela uncedo koothixo babo.
Ekugqibeleni, uYona uthi kubo: ‘Ndingumnquli kaYehova, uThixo owenza izulu nomhlaba. Yaye ndibaleka ukwenza oko ndikuxelelwe nguYehova.’ Ngoko oomatiloshe bayabuza: ‘Sikwenze ntoni na ukuze siphelise esi saqhwithi?’
‘Ndiphoseni elwandle yaye ulwandle luya kuzola kwakhona,’ utsho uYona. Oomatiloshe abafuni ukumphosela elwandle kodwa njengokuba umoya usiya uba mkhulu ngakumbi, ekugqibeleni bamphosa ngaphandle kwenqanawa uYona. Ngoko nangoko isaqhwithi siyaphela yaye ulwandle luyazola kwakhona.
Njengokuba uYona ezika emanzini, uginywa yintlanzi enkulu. Kodwa akaﬁ. Uba sesiswini saloo ntlanzi, iintsuku ezintathu nobusuku bazo. UYona ubuhlungu gqitha kuba engamthobelanga uYehova aze aye eNineve. Ngaba uyazi ukuba wenza ntoni?
UYona uthandaza kuYehova ecela uncedo. Ngoko uYehova ubangela ukuba intlanzi ihlanzele uYona kumhlaba owomileyo. Emva koko uYona uya eNineve. Ngaba oku akusifundisi ukubaluleka kokwenza konke okuthethwa nguYehova?
Incwadi yeBhayibhile kaYona.
Ngubani uYona, yaye uYehova umxelela ukuba enze ntoni?
Ngenxa yokuba uYona engafuni ukuya apho uYehova afuna aye khona, wenza ntoni?
Oomatiloshe bathi makenze ntoni uYona ukuze badambise umoya?
Njengoko ubona kulo mfanekiso, kwenzeka ntoni xa uYona etshona emanzini?
UYona uhlala ixesha elide kangakanani kule ntlanzi inkulu, yaye wenza ntoni apho ngaphakathi kuyo?
Uyaphi uYona emva kokuba ephumile kule ntlanzi inkulu, yaye oku kusifundisa ntoni?
Funda uYona 1:1-17.
Kubonakala ukuba uYona waziva njani ngesabelo sakhe sokuya kushumayela eNineve? (Yona 1:2, 3; IMize. 3:7; INtshu. 8:12)
Funda uYona 2:1, 2, 10.
Oko kwenziwa nguYona kusinika njani intembelo yokuba uYehova uya kuyiphendula imithandazo yethu? (INdu. 22:24; 34:6; 1 Yoh. 5:14)
Funda uYona 3:1-10.
Sikhuthazwa njani sisibakala sokuba uYehova waqhubeka emsebenzisa uYona nakuba ekuqaleni engazange asiphumeze isabelo sakhe? (INdu. 103:14; 1 Pet. 5:10)
Indlela uYona awaqhubana ngayo nabantu baseNineve isifundisa ntoni ngokugweba abantu abakwintsimi yethu? (Yona 3:6-9; INtshu. 11:6; IZe. 13:48)
Ikhadi LeBhayibhile LikaYona
Ziziphi iimpawu zikaYehova esifunda ngazo kwingxelo yeBhayibhile kaYona?